ဇာတိမြေမှာ ပြဿနာတက်ခဲ့တဲ့ ရိုနယ်ဒို နဲ့ . . . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစားသတင်းများ - SPORTS MYANMAR
ဇာတိမြေမှာ ပြဿနာတက်ခဲ့တဲ့ ရိုနယ်ဒို နဲ့ . . . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစားသတင်းများ
ပေါ်တူဂီ နိုင်ငံ မာဒီရာ ကျွန်းမြို့လေးမှာ အိမ်တွင်း အောင်း နေတဲ့ ယူဗင်တပ် တိုက်စစ်မှုးကြီး ခစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ဟာ ဒေသခံ တာဝန် ရှိသူတွေ နဲ့ အဆင် မပြေဖြစ် ခဲ့ကြသေးတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။ ရိုနယ်ဒို ဟာ အိမ်တွင်း အောင်း နေရစဉ် အတွင်း ကြံ့ခိုင် သန်စွမ်း နေစေဖို့ အတွက် လေ့ကျင့်မှုတွေ ပြုလုပ်ရင်း မာဒီရာ ကျွန်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ဘောလုံး ကွင်းကို အသုံးပြု ခဲ့တာ ကြောင့် စည်းကမ်း နဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ အတွက် တာဝန် ရှိသူတွေ နဲ့ စကားပြောဆို ရမှု ဖြစ်ခဲ့တယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူ ဟတ်တာ ဘယ်လာရင် ကို အင်တာ မီလန် ၊ ဆီဗီးလား နဲ့ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် အသင်း တွေ က ခေါ်ယူ ဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ရီးရဲ မက်ဒရစ် အသင်း ကတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူ ပေါလ် ပေါ့ဘာ ကို ခေါ်ယူ ဖို့ ကြိုးစားမှု မအောင်မြင် ခဲ့ပါက ပြင်သစ် လီဂူးကလပ် ရင်းနစ် မှာ ကစားနေတဲ့ ပေါင် ၅၃ သန်း တန် ကွင်းလယ် ကစား သမားလေး အက်ဒွာဒို ကာမာဗင်ဂါ ကို ကြိုးစား သွားမယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ရုရှ ကလပ် ဇင်းနစ် ကတော့ သူတို့ရဲ့ တစ်လတာ အကောင်းဆုံး ကစားသမား ဆု ကို ရရှိ ခဲ့တဲ့ ဘရာဇီး ကစား သမား မယ်ကွမ် ထံ ဒရုန်း တစ်ခု ကို အသုံးပြုပြီး ဆုကို ပေးပို့ ခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂ် အကြီးအကဲ ဂေါ်ဒွန် တိုင်လာ ကတော့ ဘောလုံး နဲ့ သက်ဆိုင်သူတွေ ကို လုပ်ခ ဖြတ်တောက် မယ့် ကိစ္စ ဟာ လုံးဝ တရားမျှတမှု မရှိကြောင်း နဲ့ အင်္ဂလန် မှာ ဘောလုံး ထက် ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ အားကစား သမားတွေ ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေ ၊ အိမ်ခြံမြေ လုပ်ငန်း သမားတွေ များစွာ ရှိနေတာကို သတိ ရကြဖို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အာဂျင်တီးနား တိုက်စစ်မှုးဟောင်း ဟာနန် ခရက်စ်ပို က အင်တာ တိုက်စစ်မှုးလေး လူတာရို မာတီနက် ဟာ မန်စီးတီး တိုက်စစ်မှုးကြီး အဂွေရို လို အရည် အသွေး မျိုး ပိုင်ဆိုင် ထားသူ ဖြစ်ပြီး ဘယ် အသင်းမှာ မဆို အံဝင် အောင် ကစားနိုင် လိမ့်မယ်လို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒေါ့မွန် ကွင်းလယ်လူ မာရီယို ဂေါ့ဇီ ကတော့ ရာသီ အကုန် မှာ အသင်း ကနေ ထွက်ခွာ တော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု သွားခဲ့ပြီ ဖြစ် ပါတယ် ။
ဘာကာ တိုက်စစ်မှုး မက်ဆီ ကတော့ ပါရာဂွေး မှာ ပတ်စ်ပို့ အတုလုပ်မှု ဖြင့် အဖမ်းခံ ထားရတဲ့ အသင်းဖော်ဟောင်း ရော်နယ်ဒင်ဟို ကို ပေါင် ၁.၃ သန်း အာမခံ ပေးလိုက်တယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ကို ငြင်းဆိုသွားခဲ့ ပါတယ် ။
လက်ဝှေ့ အကျော် အမော် ဖလွိုက် မေဝဲသာ ကတော့ သူ ဟာ လက်ဝှေ့ Trainer တစ်ဦး အဖြစ် အသက်မွေး သွားတော့မယ် လို့ အသိပေး သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ခေါင်းဆောင် ဟယ်ရီ မက်ဂွဲယား တို့ မိသားစု ဟာ သူတို့ နေထိုင်ရာ ရပ်ကွက် အတွင်း မှာ ရှိတဲ့ အသက် 70 နဲ့ အထက် လူကြီးတွေ ကို နေ့စဉ် ထောက်ပံ့ သွားမယ်လို့ သိရ ပါတယ်
ခြေကျင်းဝတ် ဒဏ်ရာ ကြောင့် ဇန်နဝါရီ အကုန် က စပြီး နားနေ ခဲ့ရတဲ့ ဘိုင်ယန်မြုးနစ် တောင်ပံ ကစား သမား အိုင်ဗန် ပါရီဆစ် ဟာ အခြေအနေ ကောင်းမွန် တိုးတက် လာပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။
ကျန်းမာရေး ကပ်ဘေး အတွင်းမှာ အလှူအတန်းတွေ ဆက်တိုက် ပြုလုပ် နေတဲ့ နယူးကာဆယ် နောက်ခံလူ ဒန်နီရိုစ့် ဟာ ယခု အကြိမ် မှာလည်း ဒေသတွင်း ပရဟိတ အဖွဲ့ ၂ ခု ထံ ပေါင် ၁ သောင်း လှူဒါန်း သွားခဲ့ တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး အသင်း ဟာ လက်စတာ စီးတီး ဘယ် နောက်ခံလူ ဘန်ချီဝဲ ကို ခေါ်ယူဖို့ အစီ အစဉ် ရေးဆွဲ နေပြီး လက်ရှိ ဘယ် နောက်ခံလူ နေရာမှာ ကစား နေတဲ့ အီမာဆင် ပယ်မာရီ ဟာ စီးရီးအေ ကို ပြန်လည် ထွက်ခွာ ဖွယ် ရှိကာ နာပိုလီ အသင်းက စောင့်ကြည့် နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
နာပိုလီ ဟာ PSG က ခေါ်ယူ ဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတဲ့ ခံစစ်မှုး ကိုလီဘာလီ ရဲ့ နေရာ ကို အစားထိုး ဖို့ အတွက် ဆီဗီးလား နောက်ခံလူ ဒီယေဂို ကားလိုစ့် ကို စောင့်ကြည့် နေတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
အဲဗာတန် နဲ့ စပါး အသင်း တို့ ကတော့ ဗလင်စီယာ ကွင်းလယ်လူ ကွန်ဒေါ့ဘီယာ ကို အပြိုင် စောင့်ကြည့် နေကြတယ် လို့ သတင်း ရရှိပါတယ် ။